Malunga nathi - Taizhou Newkye Electronics Co., Ltd.
Yiba liqabane lokuzenzekelayo lomhlaba jikelele!
E-NEWKYE, injongo yethu kukwenza u-NEWKYE adume kwihlabathi liphela. Ukubambelela kwifilosofi yecandelo le- "Specialised Concentrated Focused", nangokusebenzisana neenkampani ezaziwayo kunye namaqabane ezobugcisa ekhaya nakumazwe aphesheya, sizise ingeniso ethe kratya kubathengi ngexesha lentsebenziswano yexesha elide, kwaye sabanceda bafumana impumelelo ngakumbi kwixesha lolwazi , kunye neenkqubo zethu ezintsha ezizinzileyo kwitekhnoloji nolawulo.
Ukusukela ukusekwa kwayo, ENTSHA nyanzelisas ivuliwe injongo yokuyila, ekhawulezileyo kunye nethemba ukuphucula ukhuphiswano lweshishini. Thinabasebenzisana abaninzi iinkampani ezivela kumazwe ahlukeneyo kwihlabathi liphela kwiminyaka eliqela iinzame .
Eyethu iimveliso zibandakanya Imoto yeservo, I-stepper motor, ivaliwe i-loop stepper motor, i-servo yokuluka, umqhubi, isilawuli se-cnc, inverter njl. Senza izisombululo ezizenzekelayo zabaxumi kwaye sibancede ukulawula iindleko, ukuphucula amaxabiso eshishini. ihlala inyusa iindawo ezifanelekileyo kwaye iphuhlisiwe. Ngenxa yokusebenza okugqwesileyo kunye nexabiso elifanelekileyo, iimveliso ze-NEWKYE zisetyenziswe ngokubanzi kumacandelo oomatshini abazisebenzelayo. ezifana: Lathe, CNC umshini wokugaya, iziko Machine, umatshini mfanekiso,Umphangiot, Ukupakisha umatshini, Umatshini wempahla, Dumatshini wokucoca, Pumrhwebi, Umatshini wokusika wePlasma, uLumatshini wokusika i-aser kwaye Mbuza ukwenza umatshininjl.
Zodwa: Nika iimveliso ezigqibeleleyo ngokugxininisa kuloo nto sinobuchule kuyo!
Ukugxila: Bonelise abathengi ngokumamela ngomonde kwizimvo zabo kunye neemfuno zabo!
Ujolise: Yenza ubuchule rhoqo ngokuzinikela ngentliziyo enye kwimveliso yeR & D!
Ingqibelelo: undoqo wamaxabiso; Ubuchule: umphefumlo wamaxabiso; I-Pragmatism: umthetho wamaxabiso
Sukela umgangatho obalaseleyo, ugqithe kwimfuno yabathengi.
I-220 Volt Ac Servo Motor, I-Hybrid Stepper Motor, I-Ac Stepper Motor, Kuvalwe uMqhubi weSantya seMoto, IServo Motor Actuator, Iimoto ezihamba ngentambo ezi-6,